Otu esi etinye CouchDB na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
Otu esi etinye CouchDB na Ubuntu 20.04
July 11, 2021 June 19, 2021 by Jọshụa James
Budata GPG Key CouchDB
Nhọrọ Ụdị nhazi
IP Adreesị nhazi
Lelee ọnọdụ CouchDB
Mepụta ọdụ data CouchDB ọhụrụ
Na ntuziaka na-esonụ, ị ga-amụta ka esi etinye CouchDB ma mepụta nchekwa data site na iji UI weebụ ha na Ubuntu 20.04 LTS sistemụ arụmọrụ gị.
Ubuntu 20.04 OS (20.10 na 21.04 nwere ike iji)
Melite ngwungwu sistemụ ụbọchị
Nweta mgbọrọgwụ ma ọ bụ ohere sudo.
Njirimara ndị a na-ahụkarị na Curl arụnyere.
Na-esote, wụnye ngwugwu achọrọ.
sudo apt install software-properties-common wget
Ugbu a ịkwesịrị ibudata igodo GPG maka ebe nchekwa iji wụnye CouchDB wee nweta mmelite ọzọ n'ọdịniihu na-akpaghị aka mgbe ị na-arụ ọrụ mmelite njikwa ngwugwu dabara adaba.
Ugbu a, tinye ebe nchekwa ahụ.
echo "deb https://apache.bintray.com/couchdb-deb focal main" | sudo tee –a /etc/apt/sources.list
~$ echo "deb https://apache.bintray.com/couchdb-deb focal main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
Ozugbo agbakwunyere ebe nchekwa ahụ, ị ​​​​ga-achọ imelite onye njikwa ngwugwu ka ịmekọrịta repo ọhụrụ, ma ị nwere ike tinye CouchDB na sistemụ Ubuntu 20.04 gị.
sudo apt update && sudo apt install couchdb -y
Ozugbo ị malitere echichi usoro, ị ga-ahụ a ihuenyo gbapụta ngwa ngwa.
Ị ga-ahọrọ OK ka ịga n'ihu na ihuenyo ọzọ. Mara na ị ga-achọ ịpị igodo tab na ahụigodo gị ka ịhọrọ OK. Ozugbo emechara, pịa tinye. Mgbe ị rutere n'akụkụ nke abụọ, họrọ nhọrọ nkesa Standalone.
Nhọrọ ọzọ na nhazi ahụ bụ ịtọ adreesị IP nke interface netwọk nke CouchDB ga-ejikọta. Ọzọ, ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ otu ihe nkesa, ịkwesighi ịgbanwe ndabara "127.0.0.1Okwu.
Ị mepụtala akaụntụ nchịkwa ugbu a. Ọ ga-ajụ gị maka paswọọdụ ka ịga n'ihu. Pịnye ya wee họrọ OK. A naghị atụ aro ka ịwụpụ nzọụkwụ a. Site na ịhapụ oghere, ị na-ahapụ oghere nchekwa n'ọdịnihu.
Site na ndabara, ekwesịrị ịgbanye ngwanro ahụ na-akpaghị aka na mmalite ma malitelarị. Ka ịlele, tinye ihe ndị a.
Ihe atụ kwesịrị ịbụ:
~$ sudo systemctl status couchdb
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/couchdb.service; enabled; vendor prese>
Active: active (running) since Sat 2021-06-19 07:50:41 PDT; 42s ago
Main PID: 14835 (beam.smp)
Tasks: 38 (limit: 4617)
├─14835 /opt/couchdb/bin/../erts-9.3.3.14/bin/beam.smp -K true -A >
├─14847 /opt/couchdb/bin/../erts-9.3.3.14/bin/epmd -daemon
├─14866 erl_child_setup 65536
├─14894 inet_gethost 4
└─14895 inet_gethost 4
Jun 19 07:50:41 ubuntu systemd: Started Apache CouchDB.
Ị nwere ike tinye nchekwa data ọhụrụ site na iji CouchDB na aha njirimara "admin” na paswọọdụ ị debere maka akaụntụ ahụ n'oge nhazi nrụnye mbụ. Enwere ike ịnweta nke a site na njikwa njikwa UI nke CouchDB's Fauxton webụ nke na-abịa na ngwugwu.
Iji malite Fauxton, tinye ihe ndị a na ihe nchọgharị gị.
Ozugbo ịbanye, ị ga-ahụ ịmepụta njikọ nchekwa data nwere akara ngosi dị n'akụkụ aka nri elu. Họrọ nke a, nke ga-ebute "Mepụta database" ihuenyo. Tinye aha testdb wee họrọ partitioned ma ọ bụ na-abụghị nkebi, wee pịa na Mepụta bọtịnụ ịnọgide.
Ugbu a laghachi na ibe nchekwa data, ị nwere ike ịhụ nchekwa data ọhụrụ ị mepụtara.
Ntuziaka ahụ egosila gị otu esi etinye CouchDB wee mepụta nchekwa data site na iji UI Fauxton webụ arụnyere ngwanrọ. Iji chọpụta ozi ndị ọzọ gbasara ihe ị nwere ike ime na CouchDB ma ọ bụ nhọrọ nhazi karịa na gburugburu ebe obibi, hụ ha akwụkwọ.
Otu esi etinye WordPress na Ubuntu 20.04 Nginx MariaDB PHP7.4